Maitiro Ekukodzera kweiyo SSD Bhenefiti Mushure meSpinal Cord Kukuvara | Karman®
Inofungidzirwa Kuverenga Nguva: 3 maminitsi
Unoda kudzidza, maitiro ekufanirwa neiyo SSD Bhenefiti Mushure me Musana Kukuvadza? Gore rega rega kune vanopfuura zviuru gumi nezvinomwe kukuvara kwemutsipa. Zvakawanda zvinokonzerwa netsaona senjodzi dzekudonha kana tsaona dzemotokari. Kazhinji, Musana kukuvara kunoguma nekukuvara zvachose zvinoita kuti kushanda kusakwanise. Chero ani anga achishanda kana akamboshanda ane Musana kukuvara uye haigone kushanda izvozvi inogona kuodha chikumbiro che Social Security kuremara mabhenefiti. Chero bedzi iwe wakashanda munguva yakapfuura uye uchiziva kuti iwe wont 'unokwanisa kushandira rinenge gore, iwe unogona kufaira chikumbiro che kuremara kunobatsira.
Zvekurapa Kufanirwa ne Kuremara Benefits
Ini ndinogona kuwana SSI?
Iti a Musana kukuvara kunoita kuti usakwanise kushanda. Iwe unozofanirwa kusangana nezvinodiwa neSSA zvekukuvara uku kuti kubvumirwe kuremara kunobatsira. Mitemo iyo inofanirwa kusangana yakanyorwa muSSA's Blue Book. Zvakare, zvinosanganisira izvo zvinodiwa kune yega yega mamiriro anozivikanwa neSSA. Kuti uwane mabhenefiti nekukuvara kwepamuviri, unofanirwa kusangana nechimwe chete chezvinodiwa izvi:
yose kurasikirwa kwekushanda kwechero chikamu chemuviri nekuda kwe Musana kukuvara. Izvi zvinosanganisira kuoma mitezo yeruoko kana gumbo. Vakaremara uye quadriplegic vanhu inogona kukodzera mabhenefiti pasi peichi chikamu chechinyorwa. Vamwe vanokwanisa kukodzera pasi peichi chikamu chezita zvakare. Musana kukuvara kunogona kuremadza mimwe mhasuru uye kukodzera kubatsirwa nekuda kweizvozvo. Semuyenzaniso, Musana kukuvara kunokonzera kuoma mitezo mudumbu, ura, kana dundira.
Kukanganisika kusanzwisisika kwekufamba mune angangoita maviri magumo. Iyi inogona kunge iri ruoko uye gumbo kana maoko maviri kana makumbo maviri. Izvi zvinokonzeresa kunetseka kuenzanisa paunenge wakamira, uchifamba, wakamira kubva panzvimbo yakagara, kana kushandisa maoko uye / kana maoko.
Panyama Musana dambudziko harina kunyanya kuipa kuti rive rakanyanyisa, rakabatanidzwa nekukamurwa kukuru mune imwe yeidzi nzvimbo:
Kugona kunzwisisa, kurangarira, kana kushandisa zvinhu.
Iko kugona kutarisa kana kushanda nekukurumidza.
Kukwanisa kuzvichengeta kana kujairana shanduko nyowani.
Iwe unozofanirwa kuratidza zvinhu senge MRIs, X-rays, uye bvunzo mhedzisiro kuratidza kuti unosangana neimwe yeaya zvinodiwa. Ukasasangana neimwe yeiyo zvinodiwa asi haugone kushanda, unogona kukumbira Medical Vocational Allowance.
Kurapa Vocational Mvumo
A Kurapa Vocational Mvumo inosarudzika kune iyo kuremara zvinodiwa ndozvinoita zvinogoneka kuti iwe ubvumidzwe rubatsiro rwehurema. Kuti uwane icho, iwe unofanirwa kuve neResidual Inoshanda Kugona kugona. Izvi zvinozadzwa nachiremba wako. Inotsanangudza yako ezvinhu uye inogadzira sei hazvigoneke kuti iwe ushande. Endesa kuongororwa kweRFC nemafomu ako ekukumbira. Iyo SSA ichatarisa zvinyorwa zvako zvekurapa, kuda, uye zvimwe zvinhu zvakaita sezera rako nebasa rako rekare kuti uone kana uchikwanisa kushanda yakazara kana kwete. Kana ivo vakafunga kuti haugone kushanda yakazara, ipapo uchave unokodzera kubvumidzwa kune akaremara mabhenefiti.
Iwe unogona kufaira chikumbiro chekuremara mabhenefiti zvakananga kuburikidza newebsite yeSSA. Zvakare, kana iwe uchida rubatsiro, unogona kuita musangano chero SSA hofisi yebazi. Mumwe munhu ipapo achapindura mibvunzo yako uye akubatsire kuzadza uye kufaira chikumbiro.
Karman Hutano Hutarisirwa: https://www.karmanhealthcare.com/
Mumhara Conditions Iko Kukodzera kwe Kuremara Benefits: https://www.disabilitybenefitscenter.org/faq/spinal-conditions-qualify-disability
Kurapa Vocational Chibvumirano: https://www.disabilitybenefitscenter.org/glossary/medical-vocational-allowance
Yemunharaunda SSA Hofisi: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
Medicaid Magetsi Wiricheya
Vashandisi veWiricheya: Matipi matatu ekuteedzera kwehurema
Vashandisi veWiricheya: Kugara Wakakodzera Paunenge Uine Spinal Cord Kukuvara